सम्पादकीय आइतबार, माघ १२, २०७६ मा प्रकाशित
धुमधामका साथ शुरु भएको नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० करिब १ महिना भएको छ । यो अवधिमा कति पर्यटक आए र उनीहरु कति वसे, कति खर्च गरे र त्यसले समग्रमा भ्रमण वर्षको लक्ष्यमा कति योगदान पुग्यो ? त्यो एक ठाउंमा छ । नेपालको पर्यटन उद्योगमा यो महिनामा जे जस्ता दृश्यहरु देखा परे, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
पर्यटनको कुरा आउनासाथ पर्यटन वोर्डको कुरा आइहाल्छ । किनकी नेपालमा पर्यटक आवागमन सम्वन्धि सम्पूर्ण योजनाहरु बनाउने, काम गर्ने, जिम्मेवारी उसैको हो । तर, यतिबेला त्यही वोर्ड थला परेको छ । केही समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त छ । र, त्यसमा नियुक्तिको लागि गरिएको प्रयास चरम विवादमा परेको छ । वोर्डकै पदाधिकारीहरु सामाजिक संजालमार्फत एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त छन् । पर्यटन वोर्डको अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिवमाथि अनेक आरोप लगाइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म न त ती आरोपहरुमाथि पर्यटन सचिव वा पर्यटन मन्त्रीले नै कुनै प्रतिकृया दिएका छन्, न त वोर्डभित्रको भांडभैलोलाई व्यवस्थापन गर्न नै कुनै शसक्त कदम उठाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट पर्यटन वर्षको उद्घाटन गराएर अष्ट्रेलिया घुम्न गएका पर्यटन मन्त्री पर्केर आएपछि पनि पर्यटन वोर्डमा भएको विवाद समाधानको लागि पहल नगर्नु आफैमा आश्चर्यजनक छ ।
विश्वभरिका पर्यटकहरुले नेपाल आउंदा सबैभन्दा पहिले ‘सर्च’ गर्ने भनेकै पर्यटन वोर्डको वेभसाइड हो । जव उस्ले त्यही निकायमा लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन भन्ने थाहा पाउंछ, उस्ले के सोंच्छ होला ? यही घटनाले उसको दिमागमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र भद्रगोल छ भन्ने पर्दैन ? शायद त्यही कारण उसले नेपाल भ्रमण रद्ध गर्न पनि सक्छ वा आएर पनि यहां वस्ने दिन कटौति गर्न सक्छ । लुम्बिनी र सगरमाथा वा गैंडाको तस्विर वेभसाइडमा राख्दैमा पर्यटन ओइरिन्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार हुन संभव छैन । अरु धेरै काम गर्नुपर्छ, तर पर्यटन उद्योग फस्टाउनको लागि पर्यटन वोर्डको कार्यशैलीमा चुस्त दुरुस्तता अनिवार्य रुपमा सबैभन्दा पहिले गरिनु पर्ने काम थियो र हो । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भैसकेको अवस्थामा त यो काम एक दिन पनि ढिला नगरि गरिनु पर्दथ्यो । दुर्भाग्य पर्यटन मन्त्री नै यस्तो गंभिर विषयमा रहस्यमय तरिकाले मौन देखिइरहेका छन् । के नियतवस नै पर्यटन वोर्डलाई पंगु बनाउन कार्यकारी प्रमुख नियुक्त नगरिएको वा त्यसमा विवाद खडा गरिएको हो ? होइन भने पर्यटन मन्त्रीले कहिलेसम्म जात्रा हेरिरहने ? भ्रमण वर्षको पहिलो महिनामै देखिएको यस्तो ‘जात्रा’ले आगामी महिनाहरुमा प्रभावकारी रुपमा काम हुन्छ र पर्यटक ओइरिन्छन् भन्ने कुराको के ग्यारेण्टी ? यदि सांच्चै पर्यटन मन्त्री नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गंभिर छन् भने पर्यटन वोर्ड भित्रको भांडभैलोलाई जति सक्दो छिटो समाधान गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि स्पष्ट मार्गचित्र सहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । एयरपोर्ट र पशुपति क्षेत्रमा घुमेर, विमानस्थल छिटो बनाउंछु, सुधार गर्छु भनेर भाषण गरेर मात्र पर्यटन मन्त्रीको कार्यभार पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा पर्यटनमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।